बहानावाजीमा तरकारीको भाउ बढाउनेलाई अनुगमन गरि कारवाही गछौँ ः उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष कोइराला, बजारको माग अनुसार आपूर्ति नहुदाँ मुल्य बढ्छः कृषि उपज बजार सञ्चालक समिति अध्यक्ष खनाल | Jukson
पोखरा, ०८ भदौँ
पोखरा लेखनाथ वडा नं. ५ जिरोकिलोमिटरका भिमबहादुर थापा भन्दै थिए अहिले तरकारको भाउ छोइसक्नु छैन् । सानो सागको मुठालाई पनि ८०÷९० भन्छ, बरु एक पाउ मासु ल्याएर झोल पानी गरेर खायो आन्नदै । त्यस्तै पोखरा लेखनाथ वडा नं. १५ मा बस्ने सिमा क्षेत्रीले पनि भन्दै थिइन् । हो त नी तरकारीको भाउँ कत्ति आकाशिएको हो । हामी जस्ता साधारण मान्छेले अब त तरकारी किनेर खानै नसकिने भइयो ।
उनीहरु मात्र होइनन्, अहिले तरकारी किन्नु सुन खरिद गरेसरह भाँछ पोखरावासीलाई । बिहान बुलेका खाना पकाउनुप¥यो तनाव सुरु हुन्छ, तरकारी के पकाउने ? चर्को तरकारीको मुल्य त्यहि माथि ताजा तरकारी कहाँ किन्न पाईन्छ र ? तरकारी किन्न बजारमा गयो ओइलेको, किरा लागेको, दाग बसेको यस्तै यस्तै । त्यहि तरकारी पनि छोईसक्नु छैन् ।
आखिर किन त तरकारीको भाउ यस्तरी आकाशिएको भनेर प्रश्न गर्दा उपभोक्ता मञ्च कास्कीका अध्यक्ष कपिलनाथ कोइराला भन्छन् — तराईमा आएको बढीको कारण देखाउँदै व्यापारीले तरकारीको भाउ बढाइरहेका छन् । कोइरालाका अनुसार पोखरामा २० प्रतिशत तरकारी उत्पादन हुन्छ । ८० प्रतिशत तरकारी बाहिरबाट आयात गर्नुपर्छ । व्यापारीले तराईमा बाढीको जुन बहाना बनाइरहेका छन् । असलमा पोखरामा तरकारी धादिङ र मकवानपुरबाट आयात गरिन्छ । बाहानाबाजी गरेर बढी नाफा खाने मनसाय र उपभोक्तालाई ठगी गर्ने नियतले तरकारीको मुल्य बढाइएको कोइरालाको भनाई छ । कोइराला भन्छन्– आफै फल्ने निउँरोलाई पनि उपभोक्ताले ७० रुपैँयासम्म किनेर खान्छन् । जबकि निउँरो फलाउन कुनै लगानी नै चाहिदैन् । तर व्यापारीले विना लगानीको निउँरोलाई ७० रुपैँयासम्म बिक्रि वितरण गर्छन् । कोईरालाले भने—फेरि कृषिमा अनुगमन गर्ने अधिकार कृषि विकास कार्यालयलाई मात्र छ । त्यसैले कृषि विकास कार्यालयका कार्यालय प्रमुख लोकेन्द्र बोहोराको संयोजकत्वमा उपभोक्ता मञ्च, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्र र वैदाम प्रहरीको प्रतिनिधित्व रहेको अनुगमन समिति रहेको छ । त्यो समितिले बिहिबार र शुक्रबारबाट अनुगमन सुरु गर्छ । अनुगमन गर्दा मुल्य वृद्धि भए नभएको, तरकारीको गुणस्तरियता, विशादी प्रयोग इत्यादिको अनुगमन गरेर बढी नाफा खाने अभिप्रायले मुल्यवृद्धि गरेको पाइएमा कारवाही गरिने कोईरालाले बताए । तर मुल्यवृद्धि भएको आधार तयार गर्नुपर्ने कोईरालाको भनाई छ ।
यता बजारको माग अनुसार आपूर्ति नहुदाँ तरकारीको मुल्य वृद्धि गर्नु परेको कृषि उपज बजार सञ्चालक समितिका अध्यक्ष रुद्रप्रसाद खनालले बताए । खनाल भन्छन्— तरकारीमा किसानको साह्रै धेरै लगानी हुन्छ, लगानी अनुसारको उत्पादन हुदैँन । उत्पादन कम भएपछि बजारमा माग अनुसार खपत गर्न सकिदैँन अनि मुल्य बढ्छ । खासै मुल्य बढेको पनि छैन्, वर्खामा तरकारीको मुल्य बढ्नु सधैँको नीतिनियम नै हो किनभने खनाल भन्छन् । वर्खामा झरी पर्छ, झरीले फुल फल्दैन, फल पर्दैन । अनि कहाँबाट तरकारी उत्पादन हुन्छ ? पोखरामा धादिङ, मकवानपुरबाट तरकारी आयात गर्नुपर्छ, झरीले त्यहि राम्रोसँग तरकारीको उत्पदान हुदैँन । फेरि त्यो तरकारी गाढीमा राखेर पोखरा ल्याउनुप¥यो । बाटोघाटो राम्रो छैन, कहिले पहिरो खसेर ल्याउन समय लाग्छ, गर्मीले तरकारी कुहिने, किरा लाग्ने हुन्छ, अनि कसरी आपूति बढाउने ? अस्तिभर्खर एक गाडी तरकारी फाल्नुपरेको उनी सुनाउँछन् । बोल्न सबैलाई सजिलो हुन्छ तर व्यवहारिकतामा गाह्रो छ खनालको भनाई छ । उनले भने— हामी व्यापारी व्यापार गर्ने मात्रै होइन् सेवा गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता पनि राख्छौँ । त्यसैले व्यापार भाउ कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी व्यापारी लागि रहेका छौँ । सरकारले २० प्रतिशत नाफा लिन भनेपनि आफुहरुले ५ देखि ६ प्रतिशत नाफा कमाउन पनि नसकिरहेको उनको दाबी छ । समस्या सबैलाई छ, हामी व्यापारी पनि कम मर्कामा छैनौँ ? खनाले भनेका छन् ।